Tsy adinon'ny filoha i Antananarivo
2008-02-21 @ 17:43 in Politika
Efa nataoko tsipalotra teto androany maraina fa miandry ny tohin'ny fihetsiky ny filoha Ravalomanana ny vahoaka eto Antananarivo. Namaly tokoa izy ka nanao fitsidihana an-tsisitsisiny tany amin'ny faritra tena tra-boina ary teny Andohatapenaka no nandehanany sy teny amin'ny fasan'ny Karana (fa fasana ahoana aloha io e? fandoroana anie io fa tsy fasiana ny maty na fandevenana e?). Efa dingana tsara izay satria manjary araka ny fitenin'ny mpanohitra tokoa hoe "fihantsiana" raha tsy nanao io fihetsika io izy. Dia mety ho avy indray ny sary ifanaikaikezan'ny filoha Ravalomanana sy ny Ben'ny tanàna Andry Rajoelina samy manao akanjo hoditra mainty. Satria samy teny ry zareo ary nomena anjara fitenenana ihany koa aza.
Ny mety ihavian'ny tsikera dia ny fanomezana izay mitovy amin'ny kaominina hafa ihany (100.000.000ar) ka ilazana hoe mba tsy mitovy ihany anie ny isan'ny tra-boina. Fa efa misy aloha izay na dia mitady ho haro-tabebaka izany aza ny fomba fitenin'ny filoha indraindray amin'izao fotoana izao. Ny ahiako indray satria ny entana atolotra ho fanomezana ankoatra ny an'ny firenena hafa sy ny fiangonana Ortodoksa dia vokatra tiko no mibaribary amin'ireny zaraina ireny. Ahiako ho tahaka ny hiakatra indray ny vidim-bokatr'io orinasa io avy eo.
Rehefa ny tandrefana
2008-02-21 @ 06:47 in Politika
Manararotra hatrany raha mbola azo atao. Hiresaka ny eto an-toerana sy ny any ivelany aho. Ny eto an-toerana aloha: Andrasan'ny maro mangina ny mety ho fihetsiky ny filoha Ravalomanana manaraka. Toy ny karazana "rehareha" mihitsy manko ny nahamaika azy hakany Toamasina mba hanome ireo fanampiana tsy fantatra intsony na avy amin'ny tenany manokana na avy amin'ny fitondram-panjakana. Mifangaroharo eo ihany. Ny somary nanaitra kely manko dia ny nihazakazahanay nankany Toamasina nefa tsy tongany tao amin'ny Nosy Ste Marie fa ny praiminisitra no nalefany tany. Toa karazam-pihatsiana no ataon'ny filoha eo imason'Antananarivo tsy nifidy TIM tamin'ny fifidianana Ben'ny tanàna teo.
Ny manaraka indray raha mitodika any ivelany aho dia ity fitadiavan'ny mpanohitra any Pakistana ny tokony hialan'ny filoha Pervez Musharraf ity. Amiko manokana tsy mananjo hanao izany fitakiana fialana izany ny mpanohitra na dia nandresy tamin'ny fifidianana Depiote aza. Io fihetsika io no karazany manamafy fa mbola mila mianatra ny demokrasia hatrany ny firenena maro eto an-tany na mbola tsy mahazaka fiaraha-miasa noho ny fahazarana mifamingampingana ny aty amin'ny faritra ivelan'ny firenena tandrefana.
Ny hevitro momba an'i Kosovo indray. Hatramin'ny voalohany aho no karazany momba ny Serba amin'ity raharaha ity. Ny fomba nakana ny fahaleovantena manko dia jereko fa tsy izay loatra ny tanjona fa toa ny hikambanana amin'ny Albania. Tadidiko tsara fa nodradradradraina hoe ny an'i Albania i Kosovo fa tsy an'i Serbia. Ny tandrefana tamin'ny fotoana nitolomana dia niteny hoe "mpiteny Albaniana "Albanophone" fa tsy niteny hoe Albaniana tahaka ny amin'izao fotoana. Tonga dia ampidirina ao andohan'ny mpanara-baovao fa ireo mpiteny albaniana ireo no "Kosovara" fa ny Serba dia antsoina hoe "Serban'i KOsovo" tahaka ireny hoe mpanjana-tany ireny ireo Serba ireo. Ankehitriny mivandravandra amin'ny saina aderadera na dia miezaka ny manampi-maso aza ny tandrefana fa sainan'i Albania no ahofahofa. Toa tsotra loatra ny mamadika ny tany ho Albania rehefa avy eo. Fampiheverana hatrany fa ry zareo no tena Kosovara ary tsy raharahany ny mponina hafa lazaina fa "Serban'i KOsovo". Rehefa ny tandrefana tokoa no manohana dia manaiky avokoa ny sisa rehetra.
Oviana no hanaiky ny fahaleovantenan'i Corse ny frantsay sa noho ny Napoleon Bonaparte avy tao dia tsy ekena mihitsy izany hoe Tsy frantsay efa nitondra an'i Frantsa? Omeo fahaleovantena io NOsy io ary satria voajanahary mihitsy ny azy amin'ny mahanosy azy.